Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Mitombo hery ny areti-mifindra | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Mitombo hery ny areti-mifindra
Miketriketrika ka tera-tsemboka ny ati-dohan’ny malemilemy saina noho ny fahenoana isan’andro tatitra mikasika izao karazana asa ratsy rehetra izao, izay mahomby na tsia ho fanatanterahana ny tetika fahazoana volabe tampotampoka eo. Iza moa no tsy maniry fiadanana amin’ny fahafahana miatrika izao fahasahiranana rehetra izao noho ny fananan’ny tena vola hisedra izany ? Maro ny manofinofy izany fananana ny ampy izany, misy kosa ny tsy mijanona amin’izay nofinofy izay fa manaiky halaim-panahy dia lasa saina «mirevirevy» amin’ny famolavolana izao teti-dratsy mijoro na mareforefo rehetra izao ho fanatanterahana ilay fidiram-bola tsy an-drariny.
Mbola mizara ihany ny ampahan’olona mandrevirevy toy izany, ao ireo mitaiza izay ahafahan’ny sainy maniditsidina fotsiny ahafahany manadino ny fangirifirin’ny fahasahiranana mianjady aminy, ao kosa ireo vonton’ny fakampanahy nefa tsy manefa ilay vetsovetsony na noho ny tahotra na noho ny fahiratana kely mijanona izay mandresy lahatra azy momba ny tsy fananany fahasahina sy fahaizana ampy hanatanterahana ilay teti-dratsy. Rehefa ela ny ela anefa mety handresy ihany ilay fakampanahy mikiky mirona any amin’ny fandalinana tetika marivo ny malemy loha, ka mivadika ho mpamosavy malemy. Ny rafitra isehoan’ny asa ratsy maro karazana matetika voatatitra antsipirihany, ary eo andanin’izay, mameno ny televiziona sy ny video ny tantara izay mamatsy ny saina amin’ny fangalana tahaka…
Tahatahaka izany ny aingam-panahy nisarika ireo telovavy teny Itaosy niray tsikombakomba tamina famoronana tantara fanakonana ny andraikiny teo amin’ny fandrobana ny vola tao amin’ny toeram-piasany. Na fampisehoana an-dapihazo na fanaovana sinema anie samy mila fanomana sy famerenana ahafahana mamerina tsy miso diso ny fisehoan’ny tantara ! Voasoratra antsipiriany mialoha daholo, ary eo am-panatanterahana misy ny atao hoe script izay manara-maso sy mandray an-tsoratra izay mihetsika rehetra na ny fihetsiky ny olona izany na ny zavatra nohetsehina.
Eo ihany moa ny fiheverana fa ny vesatry ny fahantrana sy ny herisetran’ny fisehoan’ny harena no indray mianjady amin’ny olona tototry ny fahasahiranana.
Misy fahamarinana angamba izany ary adidin’ny fanjakana ny mitantana ny toe-karena ahafahan’ny mponina manao ezaka hampiarina azy avy ao anaty fahantrana. Na izany aza anefa, tsy ny fahantrana no entina ho fanamaivanana ny heloka. Na eo anivon’ny mpanana na eo amin’ny sarambabem-bahoaka dia tsy ilaozan’ny fanotana, itovizana ny tsy famidram-po sedran’izany, arakaraky ny heloka ny vesatry ny fanefana. Eo angamba no mendrika ady hevitra, ny hala-botry indraindray dia faizina amina sazy mifandanjalanja amin’ny fanefana heloka noho ny fanodikodinam-bolam-panjakana. Ny olona tsy miray dia amin’ny fitondrana eo amperin’asa angamba no aty aoriana vao tra-tehaka nitsabaka tao ambilany tany aloha.